Mpanamboatra fitaovana fitantanana ny rivotra - Orinasa sy mpamatsy mpikirakira ny rivotra i Shina
Ny fitaovana fikirakirana ny rivotra dia miasa eo akaikin'ny tilikambo mangatsiaka sy mangatsiatsiaka mba hivezivezy sy hitazomana ny rivotra amin'ny alàlan'ny fizotry ny hafanana, ny rivotra, ary ny fampangatsiahana na ny fampangatsiahana rivotra. Ny mpikarakara ny rivotra amin'ny singa ara-barotra dia boaty lehibe iray izay misy ny coil fanafanana sy fampangatsiahana, ny blower, ny racks, ny efitrano ary ireo faritra hafa izay manampy ny mpikarakara ny rivotra hanao ny asany. Ny mpikarakara ny rivotra dia mifamatotra amin'ny fantsom-pandrefesana ary ny rivotra dia mandalo avy amin'ny fitaovana fitantanana ny rivotra mankany amin'ny ductwork, ary avy eo ...
Famolavolana fizarana marefo amin'ny raharaha AHU;
Famolavolana Module mahazatra;
Teknolojia farany mitarika amin'ny famerenana hafanana;
Framework Allay Aluminium & Bridge Nylon Cold;
Panels vita amin'ny hoditra roa;
Misy kojakoja mora azo;
Coil rano fanamafisana / fanamafisana avo lenta;
Fangaro amin'ny sivana marobe;
Mpankafy avo lenta;
Fikolokoloana mety kokoa.
Fitaovana fikirakirana ny hafanana indostrialy
Ampiasaina amin'ny fitsaboana rivotra anaty trano. Ny fitaovana fikirakirana ny hafanana indostrialy dia fitaovana fanamafisam-peo lehibe sy salantsalany miaraka amin'ny fiasan-drivotra, fanafanana, hafanana tsy tapaka sy hamandoana, rivotra, fanadiovana ny rivotra ary fanarenana hafanana. Endri-javatra: Ity vokatra ity dia mampifangaro ny boaty fanamafisam-peo mifangaro sy ny teknolojia fanamafisam-peo fanitarana mivantana, izay afaka mahatsapa ny fanaraha-maso miharo volo ny vata fampangatsiahana sy ny fampangatsiahana rivotra. Manana rafitra tsotra izy io, ...
Fanarenana hafanana DX Coil Air Handling Units
Miaraka amin'ny haitao fototra an'ny HOLTOP AHU, ny cocox DX (Direct Expansion) dia manome ny AHU sy ny unit condensing ivelany. Vahaolana malefaka sy tsotra ho an'ny faritra fananganana rehetra, toy ny mall, birao, Sinema, Sekoly sns. Ny fanitarana mivantana (DX) fanarenana hafanana sy ny fanadiovan-drivotra fanamafisam-peo dia singa iray fitsaboana rivotra izay mampiasa rivotra ho loharanon'ny hatsiaka sy hafanana , ary fitaovana ampidirina amin'ny loharano mangatsiaka na hafanana. Izy io dia misy fizarana fanamafisam-peo mihamangatsiaka ety ivelany ...
Fitaovana fikirakirana rivotra fanarenana hafanana
Ny fifehezana rivotra miaraka amin'ny rivotra mankany amin'ny fanarenana hafanana, ny fahombiazan'ny fanarenana hafanana dia ambony noho ny 60%.
Fitaovana fikirakirana ny karazana rivotra
Dehumidification Type Air Handling Units Fahombiazana avo lenta sy fahamendrehana: singa mitokana ao anaty vy tsy misy fangarony miaraka amina fananganana hoditra roa sosona… Namboarina tamin'ny firakotra kilasy indostrialy, rakotra vovo MS hoditra ivelany, hoditra anatiny GI.. ho an'ny fampiharana manokana toy ny sakafo sy ny fanafody, ny hoditra anatiny dia mety SS. Fahafahana manala ny hamandoana avo. Sivana henjana mivoaka amin'ny gropy EU-3 ho an'ny fidiran'ny Air. Safidy marobe ny loharanom-pahavitrihan'ny hafanana: -ela herinaratra, etona, flèmi thermika ...
Orinasa mitantana ny rivotra mitambatra amin'ny indostria
Industrial AHU dia natao manokana ho an'ny ozinina maoderina, toy ny Automotive, Electronic, Spaceflight, pharmaceutika sns. Holtop dia manome vahaolana hiatrehana ny mari-pana amin'ny rivotra, ny hamandoana, ny fahadiovana, ny rivotra madio, ny VOC sns.